Isitya setamatato kunye nekholifulawa | Ukupheka kweKhitshi
Isitya setamatato kunye nekholifulawa
UMaria vazquez | | Iiresiphi zemifuno, Iiresiphi ezisempilweni
Ekhaya khange sibe sonqena ukuvula i-oveni. Ehlotyeni siyaqhubeka nokuyisebenzisa ukulungiselela izitya ezinje I-tomato eyosiweyo kunye nekholifulawa. Isitya esilula ukusilungiselela kwaye kube lula ukusitya, onokusigqiba ngokudibanisa imbotyi okanye isiriyeli.
Ukuba ndiyaluthanda olu hlobo lwesitya sento ethile, kungenxa yokuba abaniki msebenzi. Mane ubeke izithako kwisitya, uzinike ixesha ngesisa, uzifake ehovini ulinde. Lindela i-oveni ukuba yenze umsebenzi wayo kwaye ibuyise eminye Imifuno eyosiweyo nebomvu kancinci onokumangalisa ngayo etafileni.
Ixesha lokubhaka liya kwahluka ngokuhovini kunye nendlela yokusikwa kwemifuno. Kwimeko yethu ibe yimizuzu engama-30 ehovini; kancinci kunokuba kusithathile ukulungiselela itafile kwaye ezi iiglasi ezincinane zecompote kunye netshizi etshisiweyo njenge dessert kwisidlo sangokuhlwa. Ngaba unesibindi sokulungiselela le cauliflower eyosiweyo kunye nomthombo wetumato?
Isitya setumato kunye necauliflower eyosiweyo sisitya esilula esinokuhanjiswa sodwa okanye njengesincedisi kumalungiselelo amaninzi.
Onion itswele elibomvu
I-1 sprig yerosemary
I-1 sprig ye-lemon thyme
½ icephe elimnandi + lishushu ipaprika
Sitshisa i-oven ukuya kwi-220ºC
Sika icauliflower ibe ngamacetyana kwaye uwabeke njengesiseko kumthombo.
Yongeza i-anyanisi inqunywe ku-julienne kunye ne-tomato enqunqiweyo.
Ixesha kunye ne-drizzle yeoyile yomnquma, ixesha kunye nezandla zethu senza zonke izithako zihambe kakuhle nazo.
Nciphisa i-paprika encinci, yongeza i-sprigs ye-rosemary kunye ne-thyme kumthombo kunye nendawo ehovini.
Bhaka imizuzu engama-20 okanye de icauliflower ibe mdaka kancinci.
Sikhonza isitya setumato kunye necauliflower eyosiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Isitya setamatato kunye nekholifulawa
Ikhekhe lesiponji seAlmond kunye nemon